Famandrihana No. 7 Festive Edition 2018 - Ny Valisoa Fanampiana
Home Famandrihana No. 7 Festive Edition 2018
Famandrihana No. 7 Festive Edition 2018
Tongasoa eto amin'ny fanontana farany an'ny News Rewarding. Manana tantara sy vaovao maro ho anao izahay. Azonao atao ny manohy manavao ny vaovao miaraka amin'ny sakafom-baovaonay Twitter mahazatra sy ireo bilaogy isan-kerinandro eo amin'ny pejy fandraisana. Ankafizo ny tsangambato majika Scott amin'ny alina mamirifiry ao Edinburgh. Tongasoa eto amin'i Mary Sharpe ny hevitra rehetra mary@rewardfoundation.org.
Ao amin'ity fanontana ity Royal College of General Practitioners-atrikasa nahazoan-dalana Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia manaiky ny Porn Harms Ny fandraisantsika anjara amin'ny fikarohana Autism, Porn and Sexual Offend Cambridge, Angletera Frankfurt, Alemaina Virginia Beach, Etazonia Budapest, Hungary ASA AMIN'NY LEHILAHY FANAMPIANA HO AN'NY RAY AMAN-DRENY Loka ho an'ny CEO Fihetseham-pon'ny Media Julie McCrone avy ao amin'ny BBC Alba manangana filalaovana an'i Ruairdh Maclennan sy Mary Sharpe Firariahana mafana indrindra amin'ny taona 2019
Vaovao Royal College of General Practitioners-atrikasa nahazoan-dalana Tamin'ity taona ity isika dia nihazakazaka ny atrikasa 10 RCGP nahazoan-danja momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto mikasika ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana manerana an'i Angletera sy Irlandy. Nisy olona nanidina avy any amin'ny faritra lavitra, toa an'i Failandy, Estonia, Belfast ary Holandy. Ny mpandray anjara dia ny GP, ny psychiatrists, ny psikology, ny mpianatra, ny tanora, ny mpiasa sosialy, ny mpampianatra, ny mpanolotsaina, ny mpisolovava ary ny mpitsabo aretin-tsaina.
Ekipa TRF ao Glasgow miaraka amin'i Katriin Kütt, mpanabe ara-pananahana ao amin'ny Eesti Tervishoiu Muuseum any Estonia ary mpanazatra fanarenana Matthew Cichy avy any Belfast Faly izahay niara-nanolo-tena tamin'ny Foibe ho an'ny Tanora sy ny Fitsarana heloka bevava ho an'ny atrikasa Glasgow sy ny orinasam-panjakana Anderson Strathern ho an'ny Edinburgh iray. Nanana fiaraha-miasa tena nanohana anay koa izahay Fanompoam-pivavahana any Atsimo Andrefana ao Killarney izay hiverenanay amin'ny volana febily noho ny fangatahana betsaka. Manentana antsika ny fahalianana, ny hafanam-po ary ny faniriana atrikasa bebe kokoa, ka anisan'izany ny Cork amin'ny lohataona. Raha tianao ho tonga any amin'ny faritra misy anao izahay, azafady mba ampahafantaro anay raha vao eo am-pametrahana daty sy toerana vaovao ho an'ny taona 2019 izahay.
Darryl sy Mary miaraka amin'i Joy O'Donoghue sy Anna Marie O'Shea ao amin'ny SouthWest Counselling Center ao Killarney Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia manaiky ny Porn Harms Ny volana Jiona no namantatra ny "korontana ara-pananahana ara-piraisana ara-nofo" (CSBD) vao haingana tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny aretina (ICD-11) vao haingana. Jereo ny bilaogy eo amboniny. Izy io dia nitarika tamin'ny alalan'ny komity misahana ny siansa sy ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana na dia nisy fanoherana mahery vaika avy amin'ny vondron'olona liana mifandraika amin'ny indostrian'ny pôrnô dolara mahavelona aza, anisan'izany ireo mpanao firaisana ara-nofo izay mandà fa ny pôrnôjia be loatra dia mety ho manimba.
Ny fandraisantsika anjara amin'ny fikarohana Ny Valin'ny Fananana dia tsy vitan'ny hoe manara-maso ny fikarohana vaovao momba ny vokatr'ireo pôrnônina isan'andro, fa isika ihany koa mandray anjara amin'izany ary manome azy ireo ho an'ireo matihanina mila mahafantatra. Izany no namaranan'ny mpiara-mianatra aminay taratasyizay namintina ny fikarohana natao tao amin'ny 4th Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fihenan'ny fitondran-tena (ICBA) dia nivoaka tao amin'ny gazety matihanina Fanampiana ara-pananahana sy fanerena. Ity ny antsika bilaogy eo amboniny. Azafady mba mifandraisa aminay raha tianao ny hahazo ny taratasy feno. Faly izahay manambara fa ny taratasy mitovy amin'izany dia mamintina ireo taratasy fikarohana farany avy amin'ny 5 tamin'ity taona ityth Efa natolotra ny kaonferansan'ny ICBA ary havoaka, tsara daholo, tamin'ny fiandohan'ny 2019. Havelantsika hahalala hoe rahoviana.
Autism, Porn and Sexual Offend Ny vulnerability ho an'ny zatovolahy eo amin'ny sehatry ny autistes, indrindra ireo izay manana ny asperger Syndrome avo, ho an'ny fiankinan-doha amin'ny aterineto, dia voasarika ho amin'ny saintsika. Raha misy olona manana toe-pahasalamana avy amin'ny zaza teraka noho ny fahaterahana dia voaheloka noho ny fananana sarin'ny ankizy tsy mendrika, dia miharihary fa misy tsy fahampiana maro ao amin'ny rafi-pitsarana amin'ny fomba itondrany ireo olona ireo. Nanoratra izahay maro bilaogy momba izany. Jereo koa eto Ny tantaran'ny reny. Dia nataon'i TRF Cambridge, Angletera Ny tale jeneralinay, Mary Sharpe, dia nomena voninahitra tao amin'ny Lucy Cavendish College, Cambridge tamin'ny volana jona tamin'ity taona ity tamin'ny fanasana ny filoha Jackie Ashley. Anisan'ny mpikambana ao aminy i Mary. Ny lohahevitry ny Internet pôrnôgrafia sy ny atidoha dia mpihazakazaka be foana ary azo antoka fa faly ny mpianatra tao amin'ny oniversite 90 sy ny vahoaka nanatrika. Izy io no iray amin'ireo vahoaka be tao amin'ny oniversite nandritra ny lahateny ho an'ny besinimaro. Nankafizinay tao amin'ny efitrano fisakafoanana tao amin'ny efitrano fisakafoanana i Mary, izay nankalaza an'i Mary. Tsara ny niverina tany Cambridge.
Frankfurt, Alemaina Mino izahay (toy ny Amazon lisitry ny bestseller) izay nosoratan'i Gary Wilson Ny atidohanao amin'ny pôrnô - Pornografie amin'ny Internet ary ny fisian'ny Science of Addiction no boky tsara indrindra eo amin'ny tsena izay manazava ny olana manodidina ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto sy ny fiantraikany amin'ny fahasalamana sy ny fifandraisana. Miaraka amin'ny tantara an-jatony an-jatony sy fanabeazana tsara, manazava ny lohahevitra azo tsidihina. Mba hanampiana azy hampivoatra izany amin'ny fiteny hafa (efa tamin'ny teny holandey, arabo ary hongroà, ny sasany mbola mivoatra) dia nanatrika ny boky Fairfairy tany Alemaina izahay. Nahita olona maro be izahay ary nanantena ny hampivelatra ireo fifandraisana ireo amin'ny taona ho avy.
Virginia Beach, Etazonia Tena faly ireo mpianatra fWe mba ho mpandahateny tao amin'ny Fikambanana ho fampandrosoana ny fahasalamana ara-pananahana (SASH) isan-kerinandro amin'ity volana Oktobra ity tany Virginia Beach, Etazonia izay nitondra ny mpandray anjara tamin'ny famolavolana ny lesona ho an'ny sekoly sy ny asa atrikasa hafa ho an'ireo matianina. Mary Sharpe, tale jeneralin'ny CEO, dia mpikambana ao amin'ny Biraom-pifandraisan'ity fikambanana ity ary manohy ny famolavolana eo amin'ny sehatry ny matihanina amin'ity sehatra ity manerana ny dobo.
Budapest, Hungary TRF dia faly nanasa an'i Budapest, Hongrie mba hiresaka amin'ny fihaonambe iraisam-pirenena nomanin'ny Minisiteran'ny Fitsarana sy ny ONG ERGO tamin'ny voalohandohan'ny volana Desambra. Ny taratasy nosoratan'i Mary dia ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto momba ny fanondranana olona an-tsokosoko sy ny fomba fanao tsara indrindra hanaovana izany. Nisy ireo mpandahateny momba ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanararaotana ankizy avy any Paris sy Washington DC.
Dawn Hawkins avy ao amin'ny foibe nasionaly momba ny fampiasana herisetra ara-nofo any Washington DC
ASA AMIN'NY LEHILAHY Ny TRF dia manohy mampianatra dia ny sekoly na amin'ny sehatra tsy miankina na an'ny fanjakana. Ny drafitra lesona enina ataontsika dia eo am-pamolavolana sy hanatsarana alohan'ny hamoahana azy ireo amin'ny vidiny mirary amin'ny sekoly amin'ny taona 6. Hiresaka momba ny fifandraisana misy eo amin'ny pôrnôgrafia sy ny sexting amin'ny hetsika Hub Hub amin'ny 2019 Janoary 31 ny CEO.
FANAMPIANA HO AN'NY RAY AMAN-DRENY Inty bilaogy, Torolàlana ho an'ny Ray aman-dreny amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet miaraka amin'ny fampahalalana momba ny loharanom-pahalalana malalaka. Nohavaozina tamin'ny fototra tsy tapaka izy io ary hijery matetika tsy tapaka.
Loka ho an'ny CEO
Mary Sharpe no tale jeneralin'ny CEO ary nofantenana ho an'ny NatWest WISE100 vehivavy loka ho an'ny asany amin'ny sehatra vaovao mpisava lalana. Faly izahay fa manomboka miaiky ny asanay.
Fihetseham-pon'ny Media Ny BBC (TV sy Radio), Daily Mail, The Times, Londres'ny Londres ny androany ary ny fampahalalam-baovao hafa dia efa nanoratra momba ny asanay. Jereo ny pejy media ho an'ny antsipirihany bebe kokoa. Tokony hiseho ao amin'ny fanadihadiana iray momba ny BBC Scotland i Maria momba ny ankizy sy ny pôrnôgrafia ary ny BBC ALBA amin'ny lohataona.
Julie McCrone avy ao amin'ny BBC Alba manangana filalaovana an'i Ruairdh Maclennan sy Mary Sharpe Firariahana mafana indrindra amin'ny taona 2019 Ny mpiasa sy ny namana The Reward Foundation dia maniry ny anao indrindra amin'ny taona 2019. Manaraha anao izahay ao amin'ny Twitter @brain_love_sex. Raha fantatrao fa misy olona te hianatra bebe kokoa momba ny fiantraikan'ny pôrnônôma momba ny fahasalamana sy ny fifandraisana dia azafady Ny atidohanao amin'ny pôrnô - Pornografie amin'ny Internet ary ny fisian'ny Science of Addiction.
Firariahana mafana indrindra amin'ny taona 2019 Ny mpiasa sy ny namana The Reward Foundation dia maniry ny anao indrindra amin'ny taona 2019. Manaraha anao izahay ao amin'ny Twitter @brain_love_sex. Raha fantatrao fa misy olona te hianatra bebe kokoa momba ny fiantraikan'ny pôrnônôma momba ny fahasalamana sy ny fifandraisana dia azafady Ny atidohanao amin'ny pôrnô - Pornografie amin'ny Internet ary ny fisian'ny Science of Addiction.
Copyright © 2019 Ny Valisoa Fananana, Zo rehetra voatokana. Te-hanova ny fomba handraisanao ireo mailaka ireo?